Momba anay - Ningbo Newthink Motor Incorporated Co., Ltd
Motera mpanadio banga ao an-trano
Ningbo Newthink Motor Incorporcated Company dia mpanamboatra maotera matihanina.Ao an-tanànan'i Ningbo no misy azy, ary mirefy 3.000 M2 miaraka amin'ny famokarana.
Ny maotera Newthink dia mamolavola sy manamboatra motera tsy misy borosy DC sy AC avo lenta mba hanomezana ny fangatahan'ny indostria sy ny fampiharana ankapobeny.Toy ny fiara, kojakoja ara-pitsaboana, kojakoja an-trano, kojakoja fanaovana zaridaina, automatique birao, sns. Manana ekipa injeniera mahay izahay, ary afaka manamboatra motera isan-karazany ho an'ny mpanjifanay.
Ny motera Newthink dia mandinika tsara ny fiantohana ny kalitao sy ny fanamarinana vokatra.Ny famokarana hentitra araka ny ISO9001-9004, ary efa lasa taona, ROHS, ETL, UL sy ny sisa.
Raha mbola tsy nametraka vacuum robot ho an'ny tranonao ianao, dia ireto misy antony tsara vitsivitsy hisintonana ny trigger: Ny vacuum robot dia manao ny asa ho anao (tsy mila misintona banga be loatra), dia haka ny zava-drehetra. betsaka...
Nitombo ny mpanadio banga tsy misy tady.Ny CordZero A939 vaovao an'ny LG dia tsy fitaovana madio fotsiny intsony, matanjaka, mateza ary mora azo ho lasa zavatra ilainao andavanandro, fa tsy amin'ny sisiny fotsiny.Na izany aza, ho an'ny maxi ...